CENAM 67Ha : Tra-tehaka ireo telolahy mpisoloky ho mpiasan’ny Jirama -
AccueilSongandinaCENAM 67Ha : Tra-tehaka ireo telolahy mpisoloky ho mpiasan’ny Jirama
CENAM 67Ha : Tra-tehaka ireo telolahy mpisoloky ho mpiasan’ny Jirama
26/04/2018 admintriatra Songandina 0
Saron’ny polisy, omaly antoandro tokony ho tamin’ny 11 ora sy sasany teny amin’ny CENAM 67Ha I Maurice, 40 taona, i Rivo Ellie, 36 taona ary Tojo Harivelo, 32 taona, mpisandoka ho mpiasan’ny orinasa Jirama, izay isan’ny mampikolay ny olona. Efa ela nitoratorahana sy nifampitadiavana ireto olon-dratsy ireto satria raha ny voalazan’ny teo anivon’ny polisim-pirenena, dia ny 29 janoary lasa teo no efa nisy fitoriana mahakasika azy ireo nipetraka teny amin’ny kaomisarian’ny boriborintany fahefatra etsy Isotry. Fampilazam-baovao avy amin’ny olona tsara sitrapo no nahafantarana fa nihaodihaody teny amin’iny faritr’i 67Ha iny ireto farany, ka rehefa napetraka ny vela-pandrika dia izao niafara tamin’ny fisamborana azy ireo izao. Araka ny fitantaran’ny tompon-trano niharan’ny asa ratsin’izy ireo, dia roalahy no tonga sy niditra toa ny mpiasan’ny Jirama tao an-trano, ary nijery avy hatrany ny fitaovana rehetra fampiasa mandeha amin’ny herinaratra. Nampitahain’ireo olon-dratsy tamin’ny fandaniana isam-bolana nisoratra tao anaty “relevé” izany, ary nolazain’ireto mpisandoka ireto fa tsy mifanaraka amin’ireo fitaovana ny vola haloan’izy ireo isam-bolana, izay nohitrikitrihan’izy ireo fa miaro halatra.
Raikitra ny fampihorohoroana izay niafara tamin’ny fitakiana vola mitentina 09 tapitrisa Ariary tamin’ny tompon-trano. Norahonan’ireo roalahy izy ireo fa raha tsy manome io vola io, dia entin’izy ireo ny “compteur” ary hakariny ny raharaha. Natahotra noho izany ireo niharan’ny fisolokiana ka niady varotra ary rehefa nisy ny marimaritra iraisana teo amin’ny roa tonta dia tapaka fa 05 tapitrisa Ariary no omen’ny tompon-trano. Vantany vao lasa ireo roalahy, dia nanatona ny biraon’ny Jirama avy hatrany ireo voasoloky, nanamarina ny zava-nitranga, ary fantatra teo noho eo ihany fa tsy mpiasa ao amin’ity orinasa ity velively ireo olona ireo. Tsy niandry ela fa nametraka fitarainana tany amin’ny biraon’ny mpitandro filaminana ireo niharan-doza. Taorian’izay, dia nisesisesy ihany koa ny fitoriana voarain’ireo polisy mahakasika ireto olon-dratsy izay efa sokajiana ho gaigilahy ireto. Efa tonga teny amin’ny kaomisaria eny Isotry ny tompon’andraikitra ao amin’ny Jirama nijery, ary nanamafy fa ireo olona voasambotra ireo tokoa, ireo mpisandoka ho mpiasa ao amin’izy ireo mampitondra faisana ny olona.
Rehefa nandeha ny fakana am-bavany, dia nolazain’izy telolahy ireo fa mandeha tsiroaroa izy ireo amin’ny fanatanterahana ity asa ratsy ity. Ankoatra ny fitoriana mipetraka eny amin’ny kaomisarian’ny boriborintany fahaefatra moa, dia fantatra fa efa misy fitarainana mahakasika azy ireo ihany koa eny amin’ny polisy misahana ny ady heloka bevava etsy Anosy sy any amin’ny Zandarimariam-pirenena eny Ampitatafika. Marihina fa mbola saika hitsoaka tamin’ny moto ny iray tamin’izy telolahy ireo io omaly antoandro io, saingy tsy lasa lavitra akory dia tratran’ireo manam-pahefana. Isan’ny sehatr’asa hiharan’ny asa fisandohana ny eo anivon’ity orinasa misahana ny resaka herinaratra ity. Efa maro no tra-tehaka saingy mbola mitohy hatrany ny fikarohana. Rehefa vita moa ny fanadihadiana sahanin’ireo polisy dia atolotra ny fampanoavana ny raharaha.
Araka ny efa fantatra sy notaterina an-gazety teto, dia nametraka fitoriana mahakasika ny fanodinkodinam-bola sy ny fitantanana tsy mazava eo anivon’ny Kaomina Antananarivo Renivohitra (CUA) ny mpanolotsaina monisipaly, Lalatiana Ravololomanana, ny 30 jolay 2017. Tsy ...Tohiny